Xakamaynta xaalada wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, ficil ahaan, waa isdhexgalka astaamaha jirka iyo nafleyda ee geeddi socodka qashinka compost. Dhinac marka laga eego, xaaladda xakamaynta ayaa ah is dhexgal iyo isuduwid. Dhinaca kale, dabaylo kala duwan ayaa isku qasan, dabeecado kala duwan iyo xawaare kala duwanaansho awgeed.
● Xakamaynta qoyaanka
Qoyaanku waa shardi muhiim u ah nafaqeynta dabiiciga. Markay socoto nafaqaynta digada, qoyaanka qaraabada ah asalka asalka ah ee bacriminta waa 40% ilaa 70%, si loo hubiyo horumarka habsami leh ee compost. Qoyaanka ugu habboon waa 60-70%. Qoyaan aad u sareeya ama aad u hooseeya ayaa saameyn ku yeelan kara waxqabadka microbial aerobiotic si markaa qawaaniinta biyaha loo sameeyo ka hor halsano. Marka waxyaabaha qoyaanka maaddada ay ka yar yihiin 60%, kuleylku waa gaabis yahay, heerkulku wuu hooseeyaa oo shahaadada baaba'aya ayaa ka liidata. Qoyaanka ayaa ka badan 70%, oo saameyn ku leh hawo qaadashada, taasoo u sameysa halsano anaerobic, kuleyl tartiib ah iyo burburka oo xumaada.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in ku darista biyaha qashin qubka ay soo dadajin karto bisaylka compost iyo xasilloonida weedha ugu firfircoon Mugga biyaha waa inuu ahaadaa 50-60%. Qoyaanka waa in lagu daraa intaas ka dib oo la ilaaliyaa 40% ilaa 50%, halka aysan aheyn inay daadato. Qoyaanka waa in laga xakameeyaa wax ka hooseeya 30% alaabooyinka. Haddii qoyaanku sarreeyo, waa inuu ku qalalaa heerkulka 80 ℃.
● Xakamaynta heerkulka
Heerkulku waa natiijooyinka waxqabadka noolaha. Waxay go'aamisaa isdhexgalka qalabka. Heerkulka 30 ~ 50 ℃ ee marxaladda ugu horreysa ee isu uruurinta compost, waxqabadka mesophile wuxuu abuuri karaa kuleyl, taasoo kicinaysa heerkulka compost. Heerkulka ugu fiicnaa wuxuu ahaa 55 ~ 60 ℃. Jeermiska Thermophilic wuxuu baabiin karaa tiro badan oo ah qalabka dabiiciga isla markaana wuxuu si dhakhso leh u burburin karaa cellulose muddo gaaban. Heerkulka sarreeya waa xaaladda lagama maarmaanka u ah dilka qashinka sunta ah, oo ay ku jiraan jirrooyinka, ukunta dulinka ah iyo miraha cawska, iwm. Xaaladaha caadiga ah, waxay qaadataa 2 ~ 3 toddobaad in lagu dilo qashinka halista ah heerkulka 55 ℃, 65 ℃ muddo 1 toddobaad ah, ama 70 ℃ dhowr saacadood.
Qoyaanka qoyaanka ayaa ah qodobka saameeya heerkulka compost-ka. Qoyaanka badan wuxuu yarayn karaa heerkulka compost. Isku hagaajinta qoyaanka ayaa ku habboon kululaynta marxaladda dambe ee compost. Heerkulka waxaa lagu yareyn karaa iyadoo la kordhiyo qoyaanka, lagana fogaado heerkulka sare ee habka compost.
Bacriminta ayaa ah qodob kale oo lagu xakameeyo heerkulka. Bacriminta waxay xakameyn kartaa heerkulka maaddooyinka waxayna xoojin kartaa uumi-baxa, iyadoo ku qasbeysa hawo dhex taal taallo. Waa hab wax ku ool ah oo lagu yareynayo heerkulka falcelinta iyadoo la adeegsanayomashiinka rogayaasha compost. Waxaa lagu gartaa hawlgal fudud, qiimo hooseeya iyo waxqabad sarreeya. Si loo habeeyo soo noqnoqoshada nafaqeynta waxay xakameysaa heerkulka iyo waqtiga heerkulka ugu badan.
● Xakamaynta saamiga C / N
Marka saamiga C / N uu ku habboon yahay, bacriminta waxaa loo soo saari karaa si habsami leh. Haddii saamiga C / N uu aad u sarreeyo, sababtoo ah nitrogen la'aan iyo bey'ad sii kordheysa oo xadidan, heerka nabaad-guurka ee qashinka dabiiciga ah ayaa noqda mid gaabis ah, taasoo keeneysa in waqtiga nafaqeynta digada ay dheerto. Haddii saamiga C / N uu aad u hooseeyo, kaarboonku si buuxda ayaa looga faa'iideysan karaa, xaddi badan oo nitrogen ah ayaa lumaya qaababka ammonia. Ma aha oo kaliya saameynta deegaanka laakiin sidoo kale waxay yareysaa waxtarka bacriminta nitrogen. Microbes waxay sameysaa protoplasm microbial inta lagu gudajiro iskudarsashada dabiiciga. On miisaanka qalalan sal, protoplasm ka kooban 50% carbon, 5% nitrogen iyo 0. 25% phosphate. Sidaa darteed, cilmi baarayaashu waxay ku talinayaan in C / N ku habboon ee compost uu yahay 20-30%.
Qiyaasta C / N ee compost-ka dabiiciga ah ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo lagu darayo waxyaabo ay ku jiraan kaarboon sare ama nitrogen sare. Maaddooyinka qaarkood, sida cawska, haramaha, geedo la qalay iyo caleemo, waxaa ku jira fiilooyin, lignin iyo pectin. Sababtoo ah C / N sare, waxaa loo isticmaali karaa maaddo lagu daro maadada-kaarboon-sare. Xisaabtanka maadada nitrogen ee sare, digada xoolaha waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo lagu daro nitrogen-ka sare. Tusaale ahaan, digada doofaarku waxay ka kooban tahay ammonium nitrogen oo loo heli karo boqolkiiba 80 ee microbes-ka, si markaa si wax ku ool ah kor loogu qaado koritaanka iyo dhalmada microbial loona dardar galiyo bisaylka nafaqada.Nooc cusub granulator bacrimiye dabiici ah ayaa ku habboon wejigan. Marka qalabka asalka ahi soo galaan mashiinka, wax lagu daro ayaa lagu dari karaa iyadoo loo eegayo shuruudo kala duwan.
● Hawo bixinta iyo oksijiin
Waa qodob muhiim u ah bacriminta digada inay hawo iyo oksijiin ku filan hesho. Shaqadeeda ugu weyn waa inay bixiso oksijiin lagama maarmaan u ah koritaanka microbial. Si loo xakameeyo heerkulka falcelinta iyadoo la xakameynayo hawo si loo xakameeyo heerkulka ugu badan ee bacriminta iyo waqtiga ay dhacaan. Iyadoo la ilaalinayo xaaladaha heerkulka ugu habboon, si loo kordhiyo hawo-qaadashada ayaa ka saari kara qoyaanka. Hawo hagaagsan iyo oksijiin waxay yareyn kartaa luminta nitrogen, waxsoosaarka malodor iyo qoyaan, taas oo fududahay in la keydiyo badeecadaha sii baaraya.
Qoyaanka bacriminta ayaa saameyn ku leh dhaq dhaqaaqa jirka iyo dhaqdhaqaaqa microbial, taas oo saameyn ku yeelan doonta oksijiinta. Waa qodob go'aaminaya nafaqeynta aerobic. Waxay u baahan tahay in la xakameeyo qoyaanka iyo hawo qaadashada iyadoo lagu saleynayo astaamaha qalabka, si loo gaaro isku xirnaanta biyaha iyo oksijiinta. Iyadoo la tixgelinayo labadaba, waxay dhiirrigelin kartaa koritaanka microbial iyo taranka waxayna hagaajin kartaa xaaladda xakamaynta.
Daraasadu waxay muujisay in isticmaalka oksijiin uu kordhayo si ka hooseeya 60 ℃, isticmaalka ka hooseeya 60 ℃ uuna ku dhow yahay eber ka sarreeya 70 ℃. Qiyaasta hawo-qaadashada iyo oksijiinta waa in la xakameeyo iyadoo la raacayo heerkulka kala duwan.
Controls xakamaynta pH
Qiimaha pH wuxuu saameyn ku yeelanayaa geedi socodka nafaqeynta oo dhan. Marxaladda ugu horreysa ee nafaqeynta, pH waxay saameysaa waxqabadka bakteeriyada. Tusaale ahaan, pH = 6.0 waa barta xuduuda ee doofaarka bislaaday iyo boodhka miinshaar-dhaca. Waxay joojisaa kaarboon laba ogsaydhka iyo soosaarka kulaylka ee pH <6.0. Waxay si dhakhso leh ugu kordheysaa kaarboon laba ogsaydhka iyo soosaarka kuleylka ee PH> 6. 0. Intaad geleyso wejiga heerkulka sarreeya, ficilka isku dhafan ee sare ee pH iyo heerkulka sare wuxuu keenaa is-beddel ammonia ah Microbes waxay ku baaba'aan aashitada dabiiciga ah ee isku-darka, taasoo keentay hoos u dhigista pH, illaa 5 ama wixii la mid ah. Ka dibna asiidhyada is-bedbeddela ee is-bedbeddelaya ayaa isbeddelaya sababtoo ah heerkulka sii kordhaya Dhanka kale, ammonia, oo ay yareeyaan noolaha, ayaa ka dhigaya kororka pH. Ugu dambeyntii, waxay ku xasilisaa heer sare. Heerkulka sare ee compost, qiimaha pH ee 7.5 ~ 8.5 wuxuu gaari karaa heerka ugu badan ee nafaqeynta. PH aad u sareysa ayaa sidoo kale sababi kara khalkhal galinta xad dhaafka ah ee ammonia, sidaa darteed waxay yareyn kartaa pH-ka iyadoo lagu daro alum iyo fosfoorik acid.
Marka la soo koobo, in la xakameeyo tayada compost ma sahlana. Way fududdahay a
xaalad keliya. Si kastaba ha noqotee, maaddooyinka ayaa isdhexgala si loo gaaro guud ahaan fiicnaanta xaaladda nafaqeynta, geeddi-socod kasta waa in lala shaqeeyaa. Marka xaalada kontoroolka ay sax tahay, bacriminta si habsami leh ayaa looga baaraandegi karaa. Sidaa darteed, waxay aasaas adag u dhigtay soo saarista compost tayo sare leh.